Ahmiyadda dib u heshiisiinta oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Kulankan oo ahaa mid wada tashi ah isla markaana ay ka soo qeybgaleen gudiyada nabada ee degmooyinka dalka qaarkood iyo gudiga dib u heshiisinta qaranka Xildhibano iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaaladda Muqdisho.
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Daladda isku xirka iyo Horumarinta Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sida looga wada qeyb qaadan karo dib u heshiisinta iyo nabadeynta dadka Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah ka soo qeyb galayaasha kulanka oo ka socda degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolada dalka gaar ahaan meelaha ay ka dhisan yihiin gudiyada nabada ayaa ka hadlay sida ay la tahay nabadeynta gobolada dalka iyo ka wada qeyb qaadashada howlaha dib u heshiisinta.
Gudigoomiyaha gudiga dib u heshiisinta qaranka Ismaaciil Macalin Muuse ayaa ugu horeyn amaanay qaabka kulamadan ay u socdaan wuxuuna ku baaqay kulamada nabadeynta noocaan ah la badiyo si loogu gudbo shir weyne dib u heshiisiineed iyo hiigsiga sanadka 2016,ka.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca maamulka iyo Maaliyada ee Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in gudiyadan nabadda ee ka dhisan gobolada dalka horseed u yihiin in umadda Soomaaliyeed ay is cafiso.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo bahanyahay in umadda Soomaaliyeed ayada xaliso wax walba oo khilaaf ah loona baahanyahy in dib u heshiisiineed loo gudbo.
Wasiiru dowlaha Wasaarada Arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya C/rashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso gudiyada laga si loo gaaro hiigsiga sanadka 2016, ka.
Nikolos Key"Muungaab Magaaladda Muqdisho Wuxuu ka dhigay Meel Soomaaliya wada leedahay"SAWIRRO"